ko htike's prosaic collection: September 2009
နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဦးဥာဏ်ဝင်း ဖိနပ်ဖြင့် ပေါက်ခံရ
မြန်မာနိုင်ငံမှာ ငြိမ်ချမ်းစွာ ဆန္ဒပြတဲ့ သံဃာတော်တွေ၊ ပြည်သူတွေကို သေနတ်နဲ့ ပစ်၊ တုတ်နဲ့ရိုက်၊ လူရမ်းကားတွေသုံးပြီး အကြမ်းဖက် နှိမ်နှင်းတဲ့ အကြမ်းဖက်ခေါင်းဆောင်တွေ အခု အမေရိကန်မှာ ဖိနပ်နဲ့ပေါက်ခံခဲ့ရတာကို ကြည့်ရင် လက်နက်အားကိုးတဲ့ အကြမ်းဖက်သမားတွေအတွက် အားကိုးစရာ လက်နက်မရှိရင် အခုလို လူတကာရဲ့ ဖိနပ်အောက်မှာ ရောက်မယ်ဆိုတဲ့ သင်ခန်းစာကိုတွေ့ရပါတယ်။
လက်နက်ကိုင် အကြမ်းဖက်သမား လမ်းစဉ်ကို လိုက်မလား၊ ပြည်သူချစ်တဲ့ တပ်မတော်သား ဘဝကို ခံယူမလားဆိုတာကတော့ လက်ရှိ တာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ စစ်သားတွေရဲ့ အဆုံးအဖြတ်ပေါ်မူတည်နေပါတယ်။
သတင်းအပြည့်အစုံကို အောက်မှာ ဖတ်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ်။( BBC burmese မှ ရယူထားခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။)
အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု နယူးယောက်ခ်မြို့ ကုလသမဂ္ဂမှာ အစည်းအဝေး တတ်ရောက်ဖို့ ဟိုတယ်မှာ ရှိနေတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဦးဥာဏ်ဝင်းကို ဆန္ဒပြသူတွေက ဖိနပ်နဲ့ ပစ်ပေါက်ခဲ့ကြသလို မိန့်ခွန်းပြောဖို့ ကုလသမဂ္ဂကို သွားမယ့် ဝန်ကြီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်ကြီး သိန်းစိန်ဟာလည်း ဆန္ဒပြသူတွေက ဟိုတယ်ထွက်ပေါက်တွေကို ပိတ်ထားကြလို့ နောက်ဘက်ကနေ ထွက်ခွာခဲ့ရပါတယ်။
ဝန်ကြီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ် သိန်းစိန်နဲ့ အဖွဲ့ တည်းခိုရာ ဟိုတယ်က အထွက်မှာ ရာနဲ့ချီတဲ့ သံဃာတော်တွေ အပါအဝင် မြန်မာတွေ၊ မြန်မာ့အရေး လှုပ်ရှားသူတွေက ကြက်ဥတွေ ကော်ဖီတွေနဲ့ ပစ်ပေါက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။
ဝန်ကြီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်ကြီး သိန်းစိန် အထွေထွေ ညီလာခံမှာ မိန့်ခွန်းပြောတဲ့အခါမှာတော့ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲကို ကုလသမဂ္ဂက ထောက်ခံ ကူညီပေးဖို့ ပန်ကြားပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။
မြန်မာဝန်ကြီးချုပ်ဟာ ညနေပိုင်းမှာ အမေရိကန် အထက်လွှတ်တော်အမတ် အာရှပစိဖိတ်ဆိုင်ရာ နိုင်ငံခြားရေးရာ ကော်မတီ ဥက္ကဌ ဂျင်မ်ဝဘ်နဲ့ တွေ့ဖို့ ရှိတယ်လို့ သိရပါတယ်။
Posted by ကိုထိုက် at 17:309comments
၂၁ နှစ်မြောက် NLD နှစ်ပတ်လည် အခမ်းအနား
Posted by ကိုထိုက် at 16:440comments
Posted by ကိုထိုက် at 13:57 1 comments
Posted by ကိုထိုက် at 14:143comments
Invitation for 2nd Anniversary of Saffron Revolution in Burma
Correction for the Venue,
The right the Venue for the 2nd Anniversary of Saffron Revolution in Burma is
Room VG 01
Demonstration for 2nd Anniversary of Saffron Revolution in Burma
Venue: In front of Burmese Embassy
Mayfair, London, W1J 5DX
2nd Anniversary of Saffron Revolution in Burma
Posted by ကိုထိုက် at 21:384comments
Posted by ကိုထိုက် at 16:332comments
ရန်ကုန်တိုင်း ရဲတပ်ဖွဲ့မှူး၊ ရဲမှူးကြီးဝင်းနိုင်၊ ရဲချုပ် ခင်ရီနဲ့ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီး ဗိုလ်ချုပ်မောင်ဦးတို့၏ အရှုပ်တော်ပုံ
ယခုလပိုင်းအတွင်း၊ အထူးစုံစမ်းစစ်ဆေးရေး အဖွဲ့(စစစ)မှ ရန်ကုန်တိုင်း ရဲတပ်ဖွဲ့မှူး၏ဇနီး၊ “ဒေါ်မွှေးမွှေး” ကို ခေါ်ယူစစ် ဆေးခဲ့ပါတယ်။ ဒေါ်မွှေးမွှေးဟာရန်ကုန်မြို့တွင်း နေရာ(၅)နေရာမှာ၊ အလှပြင်ဆိုင် အမည်ခံ၍ ဝန်ထမ်းအမျိုးသမီးငယ် လေးများစွာဖြင့် အနှိပ်ခန်းများဖွင့်လှစ်ခါ၊ စီးပွားရေးလမ်းဖြောင့်ဖြူးနေသူတဦးပါ။
အဆိုပါ အနှိပ်ခန်းများမှ၊ အမျိုးသမီးငယ်အချို့မှာ၊ အနှိပ်လုပ်ငန်းအပြင်၊ အခကြေးငွေယူပြီး၊ ကာမ အပျော်မယ်များအ ဖြစ်၊ အသုံးတော်ခံ နေကြရပါတယ်။ ဧည့်သည် အဝင်နည်းတဲ့ ရက်များမှာတော့၊ ဒေါ်မွှေးမွှေးက ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းရှိ ရဲစခန်းများမှ၊ မြို့နယ်မှူး၊ စခန်းမှူးနဲ့ ရဲအရာရှိတို့၏ ဇနီးများကို၊ ဖုန်းဆက်ခေါ် အလှပြင်ခိုင်းလေ့ရှိပါတယ်။ ဆံပင်ညှပ်၊ ပေါင်းတင်၊ မျက်နှာချေးချွတ်စသဖြင့်၊ ဖိအားပေး လုပ်ဆောင်စေပါတယ်။ အထက်အရာရှိရဲ့ ဇနီးကို ကြောက်ရတဲ့အတွက်၊ အမြဲသွားရောက် အားပေးနေရတာကြောင့်၊ ငွေကြေး ထိခိုက်စေတဲ့အပြင်၊ ကျန်းမာရေးလည်း ထိခိုက်နေကြရပါတယ်။ သူတို့အချင်းချင်း တွေ့ဆုံပါက၊ အအေးမိကုန်ပြီ၊ H1N1 ဖြစ်တော့မယ် ထင်တယ်… စသဖြင့် နောက်ပြောင် ပြောဆိုလေ့ ရှိကြပါတယ်။
အဲဒီလိုဖြစ်စဉ်တွေကို မခံနိုင်တဲ့အဆုံး၊ အထက်အာဏာပိုင်တွေဆီ၊ တိုင်ကြားမှုဖြစ်ပွားရာက၊ အခုလို ဒေါ်မွှေးမွှေးကို၊ (စစစ)မှ ခေါ်ယူစစ်ဆေးခဲ့တာပါ။ အလားတူ အနှိပ်သမ အမျိုးသမီးငယ်အချို့ကိုလည်း၊ (စစစ)မှ ခေါ်ယူ စစ်ဆေးခဲ့ပါ တယ်။
အဲဒီလို စစ်ဆေးစဉ် ကာလအတွင်း၊ အဆိုပါ အမျိုးသမီးငယ်များကို၊ (စစစ)မှ၊ ညှင်းပန်းနှိပ်စက်ပြီး၊ မတရားဖြောင့်ချက်ရ ယူခဲ့ပါတယ်ဆိုခါ၊ သက်ဆိုင်ရာ ရဲစခန်းမှာ၊ နာကျင်စေမှုဖြင့်၊ အမှုဖွင့် တိုင်ကြားခဲ့ကြပါတယ်။ (ခင်ပွန်းဖြစ်သူ ရဲမှူးကြီး ဝင်းနိုင်၏ အရှိန်အဝါကို အသုံးပြုပြီး၊ ဇနီးဒေါ်မွှေးမွှေးမှ အကြံပေးခဲ့တာလို့ပြောပါတယ်)
ဒီဖြစ်စဉ်ကို၊ ပြည်ထဲရေး ဝန်ကြီးဗိုလ်ချုပ်မောင်ဦး သိရှိသွားခါ၊ ရဲမှူးကြီးဝင်းနိုင်နဲ့ ဇနီးဒေါ်မွှေးမွှေးတို့အား၊ ချက်ခြင်းဖမ်း ချုပ်ရန်၊ ရဲချုပ်ခင်ရီအား အမိန့်ပေးခဲ့ပါတယ်။ ရဲချုပ်ခင်ရီမှ ရဲမှူးကြီးဝင်းနိုင်အား၊ နေပြည်တော်သို့ ခေါ်ယူအမှုစစ်ဆေးခဲ့ ပြီး၊ ဇနီးဒေါ်မွှေးမွှေးအား ရန်ကုန်မှာ ဖမ်းဆီးစစ်ဆေးမှုတွေ လုပ်ဆောင်စေခဲ့ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့လွန်ခဲ့တဲ့၊ ၄ရက်ခန့်က၊ ရဲမှူးကြီးဝင်းနိုင်နဲ့ ဇနီးဒေါ်မွှေးမွှေးတို့၊ ဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်ထားရာမှ၊ အသီးသီးထွက်ပြေး လွှတ်မြောက်သွားကြပါတယ်။ ဒီလို ထူးဆန်းစွာ ထွက်ပြေး လွှတ်မြောက်သွားရတာဟာ၊ ရဲချုပ်ခင်ရီရဲ့ စီစဉ်ပေးမှု မပါဘဲ မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့၊ အတွင်းသိ ရဲအရာရှိများမှ သုံးသပ်ပြောဆိုနေကြပါတယ်။
ရဲချုပ်ဗိုလ်ချုပ်ခင်ရီရဲ့၊ အကျင့်ဖောက်ပြန်မှု၊ အလွဲသုံးစားမှု၊ နိုင်ငံတော်အကြီး အကဲများအား၊ နောက်ကွယ် မှာပြင်းပြင်း ထန်ထန် ဝေဖန်ပြောဆိုထားမှုတွေကို၊ ရဲမှူးကြီးဝင်းနိုင်မှ ဖေါ်ထုတ်ထွက်ဆိုမည်ကို၊ စိုးရိမ်တာကြောင့်၊ ရဲချုပ်ကိုယ်တိုင် ထွက်ပြေးခိုင်းလိုက်ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း၊ အလားတူ ယခုကိစ္စနှင့်ပါတ်သက်ပြီး၊ ဝန်ကြီးဗိုလ်ချုပ်မောင်ဦးမှ၊ ၎င်းအားအပြစ် ပုံချအရေးယူပါက၊ ရဲချုပ် ခင်ရီအနေဖြင့်၊ ဝန်ကြီး ဗိုလ်ချုပ်မောင်ဦး၏ အတွင်းရေးများ၊ လဘ်စားမှုများ၊ ဖေါက်ပြန်မှုများကို၊ အထောက်အထား ခိုင်လုံစွာဖြင့်၊ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေထံ၊ တင်ပြတိုင်ကြားမယ်လို့ ၎င်းနှင့် နီးစပ်သူများထံမှ ကြားသိရပါတယ်။
နိုင်ငံတော်ရဲ့ မှုခင်းကြဆင်းရေးကို၊ အဓိက တာဝန်ယူထားကြသူတွေ ကိုယ်တိုင်၊ ၎င်းတို့အချင်းချင်း၊ မာဖီးယားဂိုဏ်း ခေါင်းဆောင်များသဖွယ်၊ ပြုမူကျင့်ကြံနေကြပြီး၊ အာဏာ အလွဲသုံးစား ပြုလုပ်နေကြတာတွေကို၊ ကြည့်ခြင်းအားဖြင့်၊ သာမာန် ပြည်သူပြည်သားများအပေါ်၊ ဘယ့်လောက် ကောက်ကျစ် ယုတ်မာနိုင်မလဲဆိုတာ၊ ပြည်သူပြည်သားတွေသိရှိ ကြမှာပါ။ ဒီမိုကရေစီ ဘက်တော်သားတွေ အတွက်တော့၊ အထူးပြောဘို့ မလိုတော့ပါ။ တကမ္ဘာလုံးက သိရှိနေပြီးသားပါ။
ယခုကဲ့သို့ အာဏာအလွဲသုံးစားပြုပြီး၊ အမှန်တကယ် အရေးယူရမဲ့ကိစ္စများကို၊ မသိချင်ယောင် ဆောင်၍နေပါက၊ နောင် တချိန်မှာ ဖြစ်ပေါ်လာမဲ့တာဝန်ဟာ၊ နိုင်ငံတော်အကြီးအကဲ ဖြစ်တဲ့၊ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေရဲ့ တာဝန်သာဖြစ်တယ်လို့၊ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာနမှ၊ အရာရှိကြီးများက ဝေဖန်ပြောဆိုလျှက်ရှိနေပါတယ်။
Case behind the dismissing of Rangoon Division Police Commander (Commissioner of Police). Home Minister Maung Oo and Police Chief Khin Yee were involved.
Daw Hmwe Hmwe, wife of Police Colonel Win Naing (Rangoon Division Police Commissioner) was summoned by Bureau of Special Investigation (BSI) recently for enquiry and investigation of her illegal way to earn the money in the business. Daw Hmwe Hmwe owns and operates5beauty saloons and massage parlors around in Rangoon area with so many young and pretty ladies were employed. That business is very prosperous for her as beauty salon is just for covering only but she earn the fortune by running vice den behind. Those visitors to massage parlors were end up in having sex with young hostesses after spending vast amount of money. Daw Hmwe Hmwe still can’t stop her greed at that only and when sometime less customers coming into her business then she calls wives of police officers posted in Rangoon area to come to her beauty saloon and force them to do beauty care, hair cut and facial cleansing et cetera, et cetera for good of her business. Those wives of police officers were always ready and forced to go because they afraid of their husband’s superior officer but they use to joke behind as they catch common cold because of too much shampooing and worry for infesting with H1N1 flu.
For suchashameless way of doing business, BSI also investigate the hostesses employed in Daw Hmwe Hmwe business. Some of those hostesses complain that they were tortured by BSI investigators during the investigation. They complain and open the cases in some police station.
When Home Minister Maj. Gen. Maung Oo heard about the case, he was exploded and issues the order to arrest both Police Colonel Win Naing and wife Daw Hmwe Hmwe. Police Chief Brigadier General Khin Yee was in charge for investigation of the case and Daw Hmwe Hmwe was arrested in Rangoon but Police Colonel Win Naing was in Nay-Pyi-Taw and investigation was going on.
Then mystery started as Police Colonel Win Naing and wife Daw Hmwe Hmwe escaped from their custodies and disappeared last week. Information from inner circle of police said that Brigadier General Khin Yee arrange the escape for them as otherwise if investigation going on, he afraid of his involvements in briberies, corruptions, breach of trust, conduct of character and strong criticizing of his superior will surfaced. Brigadier General Khin Yee is well prepared and ready to blackmail if Minister Maung Oo tries to take action upon him. He prepares all Maung Oo’s wrong doing in full report and will send it to Senior General Than Shwe if Maung Oo tries to do some nasty action to him.
What we can see from the above case is that they are the most responsible people for restoring and preserving of law and order in the country but they act themselves like Mafia Chiefs. Foralong term, people and country will suffered from damages because of the consequences of shameless behavior and character performed by senior people like Home Minister Maung Oo, Police Chief Khin Yee and Rangoon Police Chief, Police Colonel Win Naing.
There are some criticisms in inner circle of Home Ministry that whether known or unknown by the Head of State and SPDC members about all wrong doing in the government but all responsibility will lie upon them and they are to take the consequences if not handle with drastic action in time to eliminate the misdemeanors in their organization.
Posted by ကိုထိုက် at 00:17 1 comments
အရှင်တို့၏ ဦးခေါင်းတော်မှသွေးတို့ဖြင့် နီစွေးစေခဲ့ပါပြီ။
ကြိုးနဲ့တုတ် ဒုတ်နဲ့ရိုက် ထောင်ထဲသွင်း ညှင်းဆဲ သတ်ဖြတ်
အနှိုင်းမဲ့ကျေးဇူးရှင်၏ စကား ဖယ်ရှားဝံ့သူ
မှူးကြီးဗာလ နအဖ နဲ့
မိစ္ဆာလူမိုက် ဒိဋ္ဌိတသိုက် ကို
ဒါယကာ ဒါယိကာမအဖြစ်မှ စွန့်ပစ်လိုက်ကြောင်း
ထပ်လောင်းသစ္စာ အခိုင်အမာပြု သည်
ပံသုဤုကမ္ဘာ သက်သေအရာ၌ တည်စေသောဝ်။
တတိယပတ္တနိက္ကုဇ္ဇန သပိတ်ကံဆောင် အောင်စေသောဝ်။
မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ ဓမ္မအောင်လံ မိုးထက်ယံသို့ လျှံစေသောဝ်
ရည်ညွှန်း။ ။ အမနုဿဘေး ကို ပရိတ္တပါဠိတော်အရ ဘီလူးဘေးဟုဆို၏။ ထိုခေတ်က ဘီလူး များသည် လူယောင် ဆောင်တတ်ကြ၏။ လူယောင်ဆောင်ထားသဖြင့် ဘီလူးကို လူထင်ပြီးပေါင်း မိကြ၍ ပျက်စီးကြ၇သောဖြစ်ရပ်များကို ဇာတကများ၌ တွေ့ရ၏။
ယခုခေတ်တွင်မူ လူယောင်ဆောင်ထားသော ဘီလူးအစစ်များမရှိ။ သို့ရာတွင် လူဖြစ်လျှက် လူလိုမကျင့်ဘဲ ပညာရှိယောင်ဆောင်နေသော ဘီလူးအတုများသည် လည်းကောင်း။ ကရုဏာ ရှင်ယောင်ဆောင်နေသော ဘီလူး အတုများသည်လည်းကောင်း သူတော်ကောင်းယောင် ဆောင်နေသော ဘီလူး အတုများသည်လည်းကောင်း အခြားသော အယောင်ဆောင် ဘီလူးအတုများသည် လည်းကောင်း များစွာရှိကြပါ၏။
များစွာရှိသော်လည်း အယောင်ဆောင်ကောင်းလှသဖြင့် ဘီလူးအတုမှန်းသိရန်ခက်၏။
အမှန်အားဖြင့် ဘီလူးအတုများ၏ ဘေးရန်ကြောင့် ဤလောကသည် မငြိမ်းချမ်းဘဲ ရှိနေခြင်းဖြစ်၏။ ဆူပွက်နေခြင်းဖြစ်၏။ ထို့ကြောင့် ထိုဘေးကို ယနေ့ အတွေ့အကြုံအရ အမနုဿဘေးဟု ဆိုနိုင်၏။
ဦးရွှေအောင်၏ ဗုဒ္ဓ ၊ လောကသားတို့၏အနှိုင်းမဲ့ ကျေးဇူးရှင် စာမျက်နှာ ၅၄။အပိုဒ် ၃ ။၄။
Posted by ကိုထိုက် at 16:200comments
မြန်မာစံတော်ချိန် ညနေ ၆ နာရီ
အန်ကယ် ဦးဝင်းတင်ကို ဒီနေ့ မနက် ၁၀ ခန့်က ကျောက်ကုန်းရှိ နေအိမ်မှ နအဖ လက်အောက်ခံ အာဏာပိုင်ဟု မှတ်ယူထားသော လူတချို့က လာရောက် ခေါ်ဆောင်သွားပြီး ညနေ ၄ နာရီ ၃၀ ခန့်တွင် ပြန်လည်လွှတ်ပေးလိုက်ကြောင်း သိရပါသည်။
Posted by ကိုထိုက် at 13:22 1 comments
Ba Ba U Win Tin has arrested
Yangon at 10 o'clock in the morning, U Win Tin has arrested from Kyaut Kone house near Yan kin.
Posted by ကိုထိုက် at 10:300comments
နအဖ ဘာတွေ လုပ်နေလဲ
“ထို့ကြောင့်ဤသို့” ဆိုတဲ့ ဖြေရှင်းချက်တွေကို နအဖ စစ်အုပ်စု နေ့တိုင်းနီးပါး မရပ်မနား လုပ်ပေးနေရတယ်။
တရုတ်ကို ဖားရတယ်၊ ကချင်ကို နားချရတယ်၊ ၀ ကို ကတိပေးရတယ်၊ ပြည်သူကို လိမ်နေရတယ်။
ကိုးကန့်ကို တိုက်လိုက်တာ လွယ်ပေမယ့် နောက်ပိုင်း ရှင်းရတာတွေက ပိုခက်နေတယ်။
- နအဖ စစ်ကောင်စီ ကြေညာချက် ၁/၂၀၀၉ ထုတ်ပြီး ရှင်းနေရတယ်။
- ကိုးကန့်ဒေသမှာ စိတ်ကြွဆေးပြားတွေ၊ စက်ရုံတွေ၊ လက်နက်မှောင်ခိုလုပ်ငန်းတွေ တွေ့ရှိရကြောင်း (အခုမှ) ထုတ်ပြောနေရတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့လ အထိက အဲဒီဒေသမှာ ဘိန်းအစားထိုးလုပ်ငန်းတွေ အောင်မြင်နေကြောင်း မူးယစ်ဆေးဝါး ကင်းစင်ပပျောက်နေပြီဖြစ်ကြောင်း
ဒေသတည်ငြိမ်အေးချမ်းနေကြောင်း နအဖ ရေးခဲ့ပြောခဲ့သေးတယ်။ အခုမှ ဗြုန်းစားကြီး WY ဆေးပြားတွေ ဘိန်းတွေ ဆေးခြောက်တွေ M 21 - 22 တွေ ဘယ်ကထွက်လာလဲ။
- အခုလို ကိုးကန့်ဒေသမှာ မူးယစ်ဆေးဝါးကို အသည်းအသန်တိုက်ဖျက်နေပေမယ့် အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေ အနောက် အင်အားကြီးနိုင်ငံတွေက
သတိမပြုမိတာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမလုပ်ကြတဲ့အပေါ် နအဖ ၀မ်းနည်းနေကြောင်း လျှောက်ပြော လျှောက်ရေး လုပ်နေရတယ်။
- တရုတ်ပြည်ထဲပြေးဝင်သွားတဲ့ လူတွေကို ပြန်ပြီးလက်ခံဖို့နဲ့ နယ်စပ်ဒေသမှာ တည်ငြိမ်မှုရှိဖို့ တရုတ်အစိုးရကို ကတိတွေပေးနေရတယ်။
တရုတ်နွယ်ဖွား ကိုးကန့်တွေအပေါ် လူမျိုးတုံး စစ်ဆင်တာ မဟုတ်ကြောင်း တရုတ်ကြီး ကို ရှင်းပြတာ ရွှေနားတော်သွင်းတာ လုပ်နေရတယ်။
- ထွက်ပြေးသွားတဲ့ အရပ်သားတွေရဲ့ ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကို စစ်တပ်က ယူငင်လုယက်နေလို့ ဖြေရှင်းချက်တွေ ထုတ်နေ ရတယ်။
ဘယ်တုန်းကဖမ်းထားမှန်းမသိ ဘယ်ကမှန်းမသိတဲ့ လူတွေက သူခိုးတံဆိပ် ကပ်ပေးပြီး တရားခံပြ လုပ် နေရတယ်။
ချင်းရွှေဟော်မှာ တရားခံတွေကိုဖမ်းချုပ်ထားကြောင်း ယခု ထောင်ဒဏ် ၂ နှစ်စီ ချလိုက်ကြောင်း စာလုံးမဲနဲ့ခေါင်းကြီးသတင်းတွေ ဖော်ပြနေရတယ်။
- အပစ်အခတ်ရပ်ဆဲထားတာ ကျိုးပေါက်သွားတာမဟုတ်ကြောင်းနဲ့ “၀” တွေ “ကချင်” တွေအပေါ် စစ်ရေးတိုက်ခိုက် ကျူးကျော်မှုတွေ လုပ်မှာမဟုတ်ကြောင်း
၃ ကြိမ်ထက်မနည်း ကတိတွေပေးနေရတယ်။ (၀ နယ်ကိုတော့ စစ်အင်အား ၃ သောင်းထက်မနည်း လက်နက်ကြီး လက်နက်ငယ်တွေနဲ့ ၀ိုင်းပတ်နေရာယူထားတယ်)
- သတင်းစာထဲမှာ “လောက်ကိုင်မှာသာတဲ့လ” လို “ကိုးကန့်ဒေသ ငြိမ်းချမ်းမြဲ - စိမ်းလန်းစိုပြည် စည်ကားဆဲ” လို ခေါင်းစဉ်မျိုးတွေနဲ့
အမြီးအမောက်မတည့်တဲ့ ဆောင်းပါးတွေ ရေးထည့်ပြီး တနိုင်ငံလုံးသိအောင် ၀ါဒဖြန့်နေရတယ်။
- နယ်ခြားစောင့်တပ်အသွင်ပြောင်းရေးလက်မခံလို့ အခုလို ဘိန်းပြပြီး စစ်ရေးအရ ဖြေရှင်းလိုက်တာ မဟုတ်ရ ပါကြောင်း
မြောက်ပိုင်းက အပစ်အခတ် ရပ်ထားတဲ့အဖွဲ့ တွေကို လိုက်ရှင်းပြနေရတယ်။
- သူခိုးလူမိဖြစ်သွားလို့ ဘက်စုံ ရှင်း လင်းပွဲတွေ လုပ်နေရတယ်။
- မြန်မာပြည် တောင်ပိုင်းမှာ ကရင်တွေကို အပြုတ်တိုက်ဖို့ ငါးကြင်းဆီနဲ့ ငါးကြင်းကြော်နေတယ်။ ဒီကေဘီအေ ၀တ်စုံဝတ်
သစ်ခုတ်သမား အယောင်ဆောင်ပြီး ကရင်တော်လှန်ရေးနယ်မြေထဲဝင် ကရင် ကရင် ခြင်း သတ်ခိုင်း နေတယ်။
ကရင် ကရင်ခြင်းသတ်ပြီး ပြန်လာတဲ့ ဒီကေဘီအေ တပ်မှုးကို သံလွင်မြစ်ထဲမှာဖျောင်ခဲ့ဘူးတယ်။
- လောလောဆယ် သတင်းပေါက်ကြားမှုဖြစ်ပွားသွားတဲ့အတွက် ထိုးစစ်ကို ခေတ္တရပ်ထားတယ်။ ကရင်အမျိုးသား အစည်းအရုံးဘက်က
ထိုးစစ်ဆင်လာတော့မယ့် သတင်းရလို့ ဖာပွန်-ကမာမောင်းလမ်းကို ဖြတ်တောက် ပိတ်ဆို့ ထားတယ်။
ဒီလမ်းက တပ်မဟာ ၅ ကို ထိုးစစ်ဆင်မယ်ဆိုရင် အရေးပါတဲ့လမ်းဖြစ်နေတယ် ဒီလမ်းကနေ ထောက်ပို့လုပ်ငန်းတွေသွားမယ်။
တိုက်မယ်ဆိုရင် တိုက်ပွဲကြီးတွေတော့ တိုက်မှာမဟုတ်။ မြောက်ပိုင်းအရေးက ပူပူနွေးနွေးရှိသေးတယ်။
မြောက်ပိုင်းမှာတပ်တွေ စုပုံအောထားရလို့ တိုက်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ အမြင်မျိုးဖြစ်ပေါ် လာတဲ့ အချိန်ကို နအဖ စောင့်နေတယ်။
- ရှမ်းပြည်နယ် တောင်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ တောင်ပိုင်း ၀ တပ်ဖွဲ့တွေကို ရန်စတာတွေလုပ်နေတယ်။ စစ်တပ်က လားဟူ ပြည်သူ့စစ် ယူနီဖောင်းဝတ်ပြီး
ကင်းလှည့်တာ ရှာဖွေစစ်ဆေးတာတွေလုပ်နေတယ်။ ၀ တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ ပြဿနာ တက် ရင် စစ်တပ်က လားဟူ ဘက်ကနေ
ချက်ချင်းအားဖြည့်ပေးမယ်ပြောပြီး ၀ ကို တိုက်ဖို့ လားဟူကို မြှောက်ပေး နေ တယ်။ လားဟူ ပြည်သူ့စစ် တပ်ဖွဲ့မှာ လူအင်အာ ၄၀ ၀န်းကျင်ရှိတယ်။
စစ်တပ်က နောက်ထပ် လူအင်အား ၂၀ နဲ့ လက်နက်ခဲယမ်း တွေ ဖြည့် ထားတယ်။
လူ ၅၀ - ၆၀ လောက်နဲ့ ငါးစာ ချထားတာ ငါးမျှားချိတ်ကို ၀ တပ်ဖွဲ့ တွေ မမြင်ပါစေနဲ့လို့ နအဖ ဆုတောင်းနေတယ်။
- တောင်းပိုင်း ၀ တပ် ဖွဲ့ဟာ ၀ ပြည် တပ်မတော်ရဲ့ အသက်သွေးကြော တခုဖြစ်တယ်။ တရုတ်အစိုးရကို နအဖ က ကပ်နိုင်လို့ တရုတ်ပြည်က
၀ တွေ အပေါ် ဆေးဝါး ရိက္ခာ လက်နက်ခဲယမ်း မကူညီခဲ့ရင် တောင်ပိုင်းဝ နယ်က လိုအပ်ချက်တွေကို ထိုင်းနယ်ထဲကနေ ဖြည့်ဆည်းနိုင်တယ်။
တောင်ပိုင်း ၀ တပ်ဖွဲ့ဟာ ၀ အမျိုးသားတွေနဲ့ ၀ တပ်မတော် အတွက် Logistics ဖြစ်တယ်။ ဒါကြောင့် နအဖ က တောင်ပိုင်းဝ နယ်
ထိုင်းနယ်စပ်တလျောက် မှာ အင်အားတိုးချဲ့ ချထားပြီး ဖြတ်တောက်ဖို့ ကြံနေတယ်။ ထိုးစစ်အရလဲ အရေးပါတယ်။ တောင်ပိုင်းဝနယ်က
လှုပ်ရှားနယ်မြေအရ သေးငယ်တယ် အင်အားနည်းတယ်။ စစ်ဖြစ်ပြီဆိုတာနဲ့ မြောက်ပိုင်းဝနယ်ကို စစ်ရေး အရ ခြိမ်းခြောက်ထားမယ်၊
တောင်မြောက်အဆက်ဖြတ်မယ်၊ တောင်ပိုင်းဝ နယ်ကို သိမ်းမယ် ဆိုတဲ့ စစ်ရေး ကြံစည်ချက် ရှိနေနိုင်တယ်။
- ကိုးကန့် အရေးမှာ သင်ခန်းစာ ရသွားတဲ့ အပစ်အခတ်ရပ်ဆဲရေးအဖွဲ့တွေက ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုတွေ လုပ်ထားကြလို့
ထင်သလောက် လွယ်ကူမှာမဟုတ်မှန်း နအဖ တွက်ချက်မိနေတယ်။ နအဖ အင်အားတိုးချထားပြီး ဒုတ်ပြ ခဲပြ လုပ်နေတာ
၀ လူထုက တအိမ်တယောက် စစ်ထဲလိုက်မယ်ဆိုတဲ့ ကတိပေးလိုက်သလို ၀ တပ်မတော် စစ်ဦးစီး အဖွဲ့ကလည်း
အသက်ပေး ကာကွယ်မယ်ဆိုတဲ့အတွက် ရှေ့တလှမ်းတိုးရမလား - နောက် ပြန်ဆုတ်ရမလား ဖြစ်နေ တယ်။
- အပစ်အခတ်ရပ်ထားတဲ့အဖွဲ့တွေက မြွေမသေ ဒုတ်မကျိုးလုပ်နေတာ နအဖ အခံရခက်နေတယ်။ နအဖ လက် အောက်ခံ နယ်ခြားစောင့်တပ် လုပ်တာထက်
ကချင့်လက်နက် ကချင့်လက်ထဲမှာထားပြီး ကချင်ဒေသ ကိုယ်ပိုင် အုပ်ချုပ်ရေးတပ်ဘဲ လုပ်မယ် ဆိုတဲ့ ကေအိုင်အိုရဲ့ သဘောထားနဲ့
ကေအိုင်အို မဖျက်ဘဲ ပါတီသစ်တခုဖွဲ့ပြီး ရွေးကောက်ပွဲဝယ်မယ်ဆိုတဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်ကြောင့် နအဖ အငိုက်မိသွားတယ်။
ဒါကို လတ်တလော ဖြေရှင်းဖို့ မရနိုင် သေးဘူး။ နည်းလမ်းမတွေ့ သေးဘူး။ လတ်တလော မဖြေရှင်းနိုင်ပေမယ့် မူ အရ နအဖ လုံးဝ လက်မခံနိုင်ဘူး ဆိုတာ သိသာထင်ရှားတယ်။
ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ရေး ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ဆိုတဲ့ အသုံးအနှုန်းမျိုး နအဖ ရေးဆွဲ ထားတဲ့ ဖွဲ့ စည်းပုံထဲမှာ မပါဘူး။
၆၃ ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးပွဲ ခေါ်တုန်းက နေ၀င်းစစ်အုပ်စုရဲ့ ကိုယ်စားလှယ် ဗိုလ်မှူးကြီးလှဟန်က ဗကပ ကိုယ်စားလှယ်တွေတင်တဲ့
တောင်းဆိုချက်တွေနဲ့ ပက်သက်ပြီး နှစ်လုံးထဲနဲ့ ဘောင်းဘီညပ်ခဲ့ဘူးတယ်။ ဗကပ တောင်းဆိုခဲ့တာက “တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုများအပေါ် စစ်ဆင်နေမှု ရပ်ဆိုင်းရန်”
စစ်အုပ်စု ကိုယ်စားလှယ်က ဘာ တင်ပြလဲဆိုတော့ “တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုများအပေါ်“ လို့ မသုံးပါနဲ့
ဘာကြောင့်လဲ ဆိုတော့ သူတို့နဲ့ ဘတပြန်ကျားတပြန် တိုက်နေရလို့ပါတဲ့။
အခုလည်း “ကချင်ဒေသ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ရေးတပ်” ဆိုတာနဲ့ ပါတ်သက်ပြီး နအဖ ကိုယ်စားလှယ် ဘာတွေပြောရမယ်ဆိုတာ စဉ်းစားနေမှာဖြစ်တယ်။
- ရှေ့ တန်းစစ်မျက်နှာမှာ ပြဿနာသောင်းခြောက်ထောင် တက်နေချိန်မှာ - စစ်နောက်ပိုင်း ဒေသလို့ ပြောလို့ရတဲ့
ရန်ကုန် မန္တလေး ပဲခူး ပခုက္ကူ မုံရွာ မြင်းခြံ စစ်တွေ မော်လမြိုင်မြို့ တွေမှာ မြို့တွင်းလှုပ်ရှားမှုတွေဖြစ်ပေါ်လာနေတော့ နအဖ နောက်ကြောမလုံဖြစ်နေတယ်။
- စက်တင်ဘာရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေး တကျော့ပြန်ဖြစ်လာဖို့ တာစူနေကြသလို၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လွတ်မြောက်ရေး
လှုပ်ရှားမှုတွေကလည်း အရှိန်တက်လာနေတော့ စစ်နောက်ပိုင်းဒေသတွေမှာလည်း စစ်အင်အားတွေ တိုးချထားနေရတယ်။
- ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုထောင်ချလိုက်လို့ အနောက်နိုင်ငံတွေက နအဖ အပေါ် အရေးယူမှု မူလီ ထပ်ကြပ် လိုက်တာကို အခံရခက်နေတယ်။
ဒါ့အပြင် ဒီအမှုက ဒီမှာတင် မပြီးဘဲ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ပြန်ပြီး ခုခံ ချေပ ခွင့်တောင်းတာ အယူခံတင်တာ ရှေ့ နေတွေနဲ့ တွေ့ ဆုံခွင့်တောင်းတာတွေက
သတင်းမီဒီယာတွေ ပေါ် တကျော့ ပြန်တက်လာတော့ နအဖ စိုးရိမ်နေတယ်။ အစကတော့ ကျေးဇူးရှင်ကြီး ယက်တော၊ ခုကျ ဂျိုမွှေတဲ့ ယက်တော တဲ့ နအဖ စစ်အုပ်စုပြောနေပြီ။
- နအဖ ဘက်က ရွေးကောက်ပွဲ ဥပဒေနဲ့ နိုင်ငံရေးပါတီ ဥပဒေတွေကို ခုချိန်ထိ မထုတ်ပြန်နိုင်သေးတဲ့အပေါ် အေးလွင့်တို့ အုပ်စုတွေကပါ စိတ်မရှည်တော့ဘူး။
ခပ်တည်တည်နဲ့ဆိုင်းဘုတ်ထောင် ရုံးဖွင့်ပြီး စည်းရုံးနေကြပြီ။ နအဖ ဘက်ကလည်း အနည်းဆုံးတော့ (ဒီချုပ် မပါရင်တောင်) အပစ်အခတ်ရပ်ထားတဲ့အဖွဲ့တွေ
တိုင်းရင်းသားတွေ ရွေးကောက်ပွဲဝင်မှ ဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့ လျာထားချက်ရှိလေတော့ ငြိမ်းအဖွဲ့တွေကို အရင်ငြိမ်းအောင်လုပ်နေရတယ်။
- အခုလို အချိန်မှာ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်က တရားဝင် နိုင်ငံရေးပါတီတခုရဲ့ လွပ်လပ်စွာ စည်းရုံး လှုပ်ရှား ခွင့်တွေကို ခွင့်ပြုဖို့ တောင်းဆိုလိုက်တဲ့အခါမှာ နအဖ
အတော် မကြေမနပ်ဖြစ်သွားတယ်။ အရှိုက်အထိုးခံလိုက် ရတယ်။ ဒီချုပ်ဘက်က ဒီတောင်းဆိုမှုကို နိုင်ငံရေးတိုက်ကွက်တခုလို တိုးချဲ့လုပ်ကိုင်လာခဲ့ရင်ဆိုတဲ့
စိုးရိမ်ချက် နအဖ မှာ ဖြစ်ပေါ်နေတယ်။ ဒီချုပ်ရဲ့တောင်းဆိုချက်ကို ဆူပူမှုတွေ လုပ်တော့မယ်။ လူထုအုံကြွမှုတွေ ဖြစ်တော့ မယ်ဆိုတဲ့ အကြောင်းပြချက်နဲ့ ပယ်ချဖို့ ကြံစည်နေတယ်။
- အုံကြွမှုတွေက တကယ်ဖြစ်လာတော့မယ့် အလားအလာတွေရှိနေပြီ။ ဖြစ်လာဖို့ တာစူနေပြီ။ အခုတခေါက်ဖြစ် လာရင် အရင်လို ထိမ်းနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။
မဖြစ်ခင် ကြိုပြီး ရှင်းပစ်ဖို့ နအဖ အမိန့်ထုတ်ထားတယ်။ တပြည်လုံး စစ်မျက်နှာဖြစ်နေပြီ။ နေရာတိုင်း လက်နက်ကိုင်တွေချထားရတယ်။
တပြည်လုံး လူဖမ်းပွဲတွေ လုပ်နေတယ်။ သံဃာတွေကို ဖမ်းနေတယ်။ ကျောင်းသားတွေကို ဖမ်းနေတယ်။ လောက်လေးဂွ တပ်တွေ ဖွဲ့နေတယ်။
- နအဖ အကြောက်ဆုံးက ရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေးအပြီးမှာ ခေတ်စားလာတဲ့ မြို့ပြပျောက်ကြား အယူအဆနဲ့ မြို့ပြ ပျောက်ကြား လှုပ်ရှားမှု။
မြို့ပြပျောက်ကြား မီးဒုတ် ကိုင်လိမ့်မယ်။
မြို့ ပြပျောက်ကြားရဲ့အဓိက ရည်ရွယ်ချက်က ရန်သူ့နောက်ကျောမှာ လှုပ်ရှားတယ်။
ရန်သူ့စစ်နောက်ပိုင်းဒေသတွေမှာ အဖျက်လုပ်ငန်းတွေလုပ်တယ်။ ရန်သူ့ ပစ္စည်းတွေ ဖျက်ဆီးပစ်တယ်။
ဂိုထောင်တွေ မီးတိုက်ပစ်တယ်။ မော်တော်ယဉ်တွေ မီးရှို့ ပစ်တယ်။
ရန်သူ့ သတင်း ပေးတွေ သစ္စာဖောက်တွေကို ဆုံးမပစ်တယ်။
မြို့ ပြယဉ်ကျေးမှုထဲက မြို့ ပြပျောက်ကြားတွေ ပေါ်ထွက်လာမှာ နအဖ အစွမ်းကုန် ကြောက်နေတယ်။
မေးလ်ထဲမှ စာတစ်စောင်ကို ပြန်လည် ဖေါ်ပြလိုက်ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
Posted by ကိုထိုက် at 01:403comments
An Israel/Middle East Angle to the recent SPDC move against its long-time 'proxy', the Kokant
CIA, Mossad Take Major Hits in Asian Covert Operations
Roll-up of arms caches results in Chinese-Burma border trouble.
(WASHINGTON, D.C.) - WMR has learned from its Asian intelligence sources that the CIA and Mossad recently suffered major hits in covert operations being conducted in Asia.
Israeli criminal gangs operating methamphetamine labs in northern Burma (Myanmar), under the protection ofasizeable Israeli security and intelligence presence in the country, infiltrated the United Nations poppy eradication program.
The program seeks to convince ethnic Wa and Kokang's in the "Golden Triangle" region famous for opium production to change to other legal crops and turn in their weapons, mostly Chinese-made AK-47s, for cash.
Recently, the Kokang Myanmar National Democratic Alliance Army and United Wa State Army have been engaged in open warfare with Myanmar military forces afterapeace agreement with the Myanmar junta broke down.
Overathousand ethnic Chinese Kokang militia members have crossed into China, along with tens of thousands of refugees, creatingamajor rift between two traditional allies: Myanmar and China. Beijing has cautioned the Burmese junta in Naypyidaw against its moves against the
Kokang along the border.
However, there may be another reason for the Burmese junta move against the northern ethnic groups. Many of the weapons being sold to the UN by the ethnic armies as part of the poppy eradication program are being bought up by Iranian agents and, according to WMR's sources,
being shipped to southern Lebanon and Gaza for operations against the Israelis.
The Israelis, who back the Naypyidaw regime with intelligence and military support, want to stop the flow of weapons from northern Myanmar to Hamas and Hezbollah.
The northern Burmese ethnic groups are caught inacross-fire directed from the Israeli regime in Jerusalem and their proxies in Naypyidaw. WMR has learned thatamajor target of the Myanmar junta's forces are UN arms caches and Wa and Kokang small arms factories.
By startingamajor war in the Chinese border region, the Myanmar junta and their Israeli advisers may faceasevere backlash from China, which is known to take seriously threats to its border regions.
In the last few months, the CIA withdrew the Deputy Chief of Mission, Randy Berry, and the charge d'affaires from the U.S. embassy in Kathmandu, Nepal. WMR has been told by our Nepali sources that the two officials botchedamajor CIA "Free Tibet" operation in Nepal's remote
northern Mustang region, which borders on Tibet.
The CIA, along with the Soros Open Society Foundation, has infiltratedanumber of Tibetan exile groups in Nepal. The word from Kathmandu is that U.S. Ambassador Nancy Powell is the next on the chopping block over the failed CIA operation to support Tibetan independence operatives from Nepali territory.
For more information on this story, visit waynemadsenreport.com
Posted by ကိုထိုက် at 01:55 1 comments
Posted by ကိုထိုက် at 23:57 1 comments
Posted by ကိုထိုက် at 02:056comments
(www.mizzimaburmese.com မှ ရယူထားပါသည်။)
Posted by ကိုထိုက် at 02:492comments
Posted by ကိုထိုက် at 14:374comments